Shanta Meelood ee Faa'iidada Leh ee Suuq kasta ah | Martech Zone
Noloshaydii hore ee shirkadeed, waxaan si joogto ah ula yaabay farqiga isgaarsiineed ee u dhexeeya dadka alaabooyinka soo saaray, iyo dadka suuqgeynaya iyo kuwa iibinaya. Ahaanshaha daaqade iyo xallinta dhibaatada bulshada, marwalba waxaan isku dayi lahaa inaan helo hab lagu soo koobo farqiga u dhexeeya kuwa sameeya iyo kuwa wax iibinaya. Mararka qaar dadaaladaasi way guuleysteen, mararka qaarna ma guuleysan. Haddana intii aan iskudayey inaan xalliyo shaqooyinka gudaha ee shirkadaha aan u shaqeeyay, waxaan ku turunturooday waxa aan aaminsanahay inay yihiin runta guud ee ku saabsan sumadda iyo horumarinta wax soo saarka.
Runta ugu horeysa, Focus Focus, ayaa la sharaxay halkan.
Runta labaad, Jagada Nooca, waa sida ay shirkaduhu ugu tartamaan suuqa, iyo sida booska suuqa uu u tilmaamayo guusha. Waxa soo socdaa waa sharaxaad gaaban oo ku saabsan fikradan, oo ay la socdaan tusaalooyin boos kasta. (Qoraalka qoraaga: Waxaan aaminsanahay in aasaaska runtaan uu ka yimid buug laga akhriyay inta aan ku guda jiray horumarkayga shaqsiyadeed, markaa hadii tani ay u muuqato mid la yaqaan, oo ah haddii aad tahay qoraaga buugga, fadlan ii sheeg si aan u helo asalkayga asalka ah ku dhowaad labaatan sano
Microsoft, oo ah shirkad weyn oo caalami ah, ayaa ku tartamaysa meel kasta. In badan oo ka mid ah wax soo saarkooda, ma ahan oo keliya inay leeyihiin saamiga suuqa, laakiin waxay leeyihiin ku dhowaad dhammaan suuqa. Haddana meelaha qaarkood waa kuwa labaad, saddexaad, ama afaraad oo fog. Waa maxay sababta tan? In kasta oo jawaabta oo dhammaystiran ay tahay mid dheer oo farsamo leh, jawaabta heerka macaamilku waa mid aad u fudud: qaybaha, ma aha noocyo, qeexayaan guusha suuqa.
Qeyb, si fudud loo qeexay, waxa isticmaalahaagu u kala saari doono alaabtaada inay noqoto. Haddii aan ku weydiiyo nooca shey Windows XP yahay, waxaad u badan tahay inaad ii sheegto? Operating System?. Marka Nidaamka Hawlgalku wuxuu noqonayaa qaybta wax soo saarka, Microsoft-na waxay si cad u xukumi doontaa qaybta.
Laakiin markaan ku tuso Zune oo aan weydiiyo qaybta, waxay u badan tahay inaad ii sheegi lahayd MP3 Player. Microsoft ayaa si cad u lumineysa qaybtaan Apple. Muxuu Microsoft u dooran lahaa inuu xitaa ku tartamo halkan, markii Apple ay si cad u maamusho? Hagaag, waxay soo baxday inay jirto lacag la sameeyo iyada oo laga dhigayo lambar fiican laba xitaa haddii lambarka koowaad uu yahay mid weyn. Xaqiiqdii waxaa jira shan boos oo kaladuwan oo ah qayb faa'iido leh, haddii aad taqaanno sida loo isticmaalo.
Shanta Meelood ee Faa'iidada Leh
Shanta boos ee faa'iido u leh nooc kasta oo suuq ah ayaa ah Hogaamiyaha Suuqa, Labaad, Bedelka, Boutique-ga, Iyo Hogaamiyaha Qeybta Cusub. Mid kasta oo ka mid ah jagooyinkaas waxaa suurtagal ah in lacag laga sameeyo, oo ay suurtagal tahay in la koro. Laakiin waxaa ku xigta wax aan macquul aheyn in laga guuro hal boos oo loo wareego meel kale iyadoo aan laga helin caawimaad dibadeed.
Sawirka kore, boos kasta waxaa lagu sawiray booskiisa iyo cabirka saamigiisa suuqa. Sida laga yaabo inaad ogaato, cabirradu si yar ayey u yaraanayaan. Marka waa maxay sababta ay u tahay wax aan macquul aheyn in la guuro? Sababtoo ah marka jago kastaa ay aad uga yartahay tan ka horreysa, maalgashiga loo baahan yahay in lagu beddelo jagooyinka ayaa aad uga culus faa'iidooyinka laga beddelayo.
Haddaba, aan eegno boos walba shaqsi ahaantiisa, si aan u aragno sida boos walba ugu kala duwan yahay. Layligan, waxaan u adeegsan karnaa qaybta cola, maxaa yeelay si wanaagsan ayey dadka badankiisu u fahmeen.
Mawqifka Koowaad: Hogaamiyaha Suuqa
Coke, dabcan, waa hogaamiyaha. Meel walba way joogaan, faa'iidadooduna waa halyey. Waxay yihiin tusaalaha koowaad ee hogaamiyaha. Sababtoo ah waxay ku leeyihiin tartan adag sida Pepsi, runti ma lahaan karaan wax suuq ah oo dheeri ah. Marka fursada kaliya ee dhabta ah ee ay ku kori karaan waa inay galaan suuqyo cusub. Sababta Sababtoo ah way ka qiimo jaban tahay furitaanka qaybinta Shiinaha halkii Pepsi looga saari lahaa Safeway.
Jagada Labaad: Ta Labaad
Pepsi waa Second adag. Waxay sidoo kale yihiin meel kasta, runtiina waxaa loo maleynayaa inay yihiin bedelka kaliya ee Coke. Marka sidee ayey u koraan? Saamiga ka qaadashada Coke waa qaali oo dhib badan tahay, laakiin gelitaanka Shiinaha hal sano kadib markii coke uu aad u fudud yahay waana ka raqiisan yahay. Waxay qorayaan koritaanka qaybta 'Coke'.
Booska saddexaad: Beddelka
Meelaha qaar ee dalka RC Cola ayaa ah Beddelka. Laakiin iyagu meel walba ma joogaan, mana haystaan ​​dabka suuqgeynta ee labada weyn leeyihiin. Marka sidee ayey u koraan? Aag deegaan ahaan. Waxay bartilmaameedsadaan wadiiqooyin gaar ah halkaasoo looga arki karo inay yihiin deegaan ama mid gaar ah ayna ku koraan? Albaab ilaa albaab?.
Booska Afaraad: Boutique-ga
Soodhaha 'Jones' waa nooc muhiim ah. Waxay iibiyaan kookaha, laakiin Jones waa ku yar yahay colaada, iyo wax badan oo ku saabsan khibrada cola. Koolaku wuxuu kaliya ku yimaadaa dhalooyinka quraaradaha leh sonkorta bakooradda saafiga ah, farshaxanno farshaxan oo astaan ​​ah, iyo qiimo sare. Tani sida muuqata maahan tartan guud oo waaweyn. Hase yeeshe iyagu waa kuwo faa'iido leh, waxayna leeyihiin taageerayaal daacad ah. Sababta Sababtoo ah waxay si xushmad leh ugu gudbiyaan koox-hoosaad gaar ah oo isticmaalayaasha cola.
Booska shanaad: Hogaamiyaha Nooca Cusub (NCL)
Marka hadaad rabto inaad carqaladeyso qayb, sidee u sameysaa? Shakhsiyan, waxaan weydiin lahaa halyeeyada suuqa ee ka dambeeya Red Bull. Waxay dhiseen boqortooyo dhan oo qof walba u sheegaysa inaysan ahayn cola, laakiin tamar? Dabcan Red Bull lama tartami karin Coke markay bilaabeen. Laakiin way u sheegi karaan dadka qaybtooda, Tamarta, ayaa ka fiicnayd. Taasina miyaanay la tartamaynin Cola si kastaba ha noqotee? Waxay u adeegsadeen qaybtooda cusub inay ku galaan khaanadaha dukaanka ee coke horeyba u guuleysanayay. Waxayna sameeyeen iyaga oo aan waligood la tartamin Coke ama Pepsi madaxa iyo madaxa.
Weyn, markaa maxay arrintani u dhacday?
Su’aal wanaagsan. Jawaabtuna waxay ku soo dhaceysaa tan: hadaad taqaanid jagadaada, waxaad taqaanaa sida loogu tartamo faa'iido. Haddii aadan aqoon meesha aad taagan tahay, waxay u badan tahay in lagaa iibin doono ganacsi, suuq-geyn, ama qorshe koritaan oo lacag badan ku khasaarin doona isku day ah inay kugu wareejiso meel aadan qabsan karin. Muhiimad ahaan, markaad ogaatid jagadaada, waxaad horumarin kartaa qorshooyinka ganacsiga iyo suuqgeynta kuwaas oo xoojinaya jagooyinkaaga macaashka, oo waxaad soo saari kartaa heerar sare oo soo noqosho ah.
Tags: deeqsiinjagooyinka suuqgeyntaHogaamiyaha Qeybta CusubBedelkaBoutique-gaHogaamiyaha SuuqaLabaad
Grant Lange wuxuu ka mid yahay xubnaha aasaasay Istuudiyaha Caddaynta, summadaynta iyo horumarinta wax soo saarka wadajirka ah. Wuxuu la shaqeeyaa shirkadaha yar iyo weynba si loo horumariyo sumcado wax ku ool ah iyo qorshayaal horumarineed oo wax soo saar.
Iswaafajinta Dijital iyo Dhaqanka: Waxyaabaha Yaryar ayaa Muhiim ah
Tiknoolajiyadda Suuqgeynta Ugu Weyn Abid
Febraayo 23, 2010 saacadu markay tahay 10: 59 AM
Had iyo jeer way fiicantahay in dib loo eego runtiina waan jeclahay soo bandhigida - Waa hagaagtay waana iska cadahay inaan ahay Boutique 🙂
Feb 24, 2010 markay ahayd 1:54 PM
Mid ka mid ah xiisaha xiisaha leh ayaa ah – taas oo ku xidhan hadba waxa uu iibsaduhu raadinayo – waxaad ku jiri kartaa doorar kala duwan. Tusaale ahaan, Jones waa ciyaaryahanka ugu awooda badan boutique / craft / premium sodas, laakiin si cad boutique markii loo fiirsado kahortaga.
Taasi waa waxa shaqooyinkayaga ka dhigaya kuwo xiiso leh.